कारवाहीमा रहेका ४ फुटबलरले लिग खेल्न पाउने संभावना पनि कम ! | | Neplays.com
कारवाहीमा रहेका ४ फुटबलरले लिग खेल्न पाउने संभावना पनि कम !
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आयोजनामा हुन लागेको ए डिभिजन लिगमा चार युवा खेलाडीले खेल्न नपाउने संभावना निकै बढि रहेको छ ।
फिफा विश्वकप छनोट अन्तर्गत कुवेत विरुद्धको खेलका लागि भुटान जानुभन्दा अघिल्लो राती नाइट क्लवमा गएको भन्दै कारवाहिमा परेका चार खेलाडी बिमल घर्तिमगर, अञ्जन विष्ट, सन्तोष तामाङ र दिनेश राजवंशी आसन्न लिगमा पनि खेल्न पाउने संभावना निकै कम संभावना रहेको छ ।
एन्फा स्रोतका अनुसार उनीहरुमाथि अनुशासनको कारवाही बाँकी रहेको र अनुशासन समितीले आफ्नो सुनुवाई नगर्दासम्म खेल्न नपाउने भएका छन । जसका कारण उनीहरु लिगमा खेल्ने संभावना कम रहेको बतायो ।
यसअघि घरेलु भूमीमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पनि यीनीहरुले खेल्न पाएका थिएनन् । सागको टिममा चार मध्ये तीन जना खेलाडी रहेका थिए ।
अघिल्लो सिजनको लिगमा विमलले च्यासलबाट केहि खेल खेलेका थिए । यस्तै अञ्जन मनाङमा रहेका छन । पुलिसका दिनेश राजवंशी र आर्मीबाट खेल्दै आएका सन्तोष तामाङका विषयमा एन्फाको अनुशासन समितीले एक्सन लिन बाँकी रहेको छ ।
उनीहरुले लिग खेल्न पाउने नपाउँनेमा सो समितीको निर्णयमा भर पर्ने बताइएको छ । मंसिर २८ गतेबाट सुरु हुने ए डिभिजन लिगका लागि सबै टिमले खेलाडी अनुबन्धनको काम सुरु गरिसकेका छन । जसमा एन्फाले खेल तालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।